GAROWE, Puntland - Dowlada Puntland ayaa cod dheer ku dalbatay in laga qayb geliyo wadaxaajoodyada u bilaaban raba dowlada federaalka iyo maamulka Somaliland, sida ku war-murtiyadeed laga soo saarey shirka jiheynta siyaasada ee xukuumada Deni.
Shirkaan oo socday saddexdii cisho ee lasoo dhaafay ayaa lagu falanqeeyay xaalada guud ee dalka gaar ahaan dhinacyada amniga iyo siyaasada ay ku shaqeynayso xukuumada cusub.
Maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowlada dhexe waxay inta badan isku qabtaan qodobo dastuuri ah oo xeerinaya in labada dhinac ay iska talageliyaan marka ay galayaan heshiisyo masiiriga ah.
"Sidaasi awgeeda, Puntland waa in ay qayb ka tahay wadahadal walba oo saameynaya degaanadeeda, gaar ahaan wadahadalada u dhaxeeya dowlada federaalka iyo Somaliland," ayaa lagu yiri bayaanka.
Dhowaan ayay ahayd markii degaano ka tirsan gobolka Sanaag ay ciidamada Somaliland yimaadaan, talaabo uu si adag u cambaareeyay Madxwayne Deni oo wacad ku maray in uu difaaci doono dhulka iyo dadka Puntland.
LAASCAANO, Somalia- Wasiirka Arimaha Gudaha maamulka Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo kamid ahaa wafdi soo gaaray degmada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa si adag uga hadlay arrimo ku saabsan doorashada Madaxtinimo ee maamulkaas isu diyaarinayo.< ...